Dugsiga Sare ee Booliiska Ee Scuola Polizia oo doorashada Afhayeenka Barlamaanka ka dhaceyso – idalenews.com
Dugsiga Sare ee Booliiska Ee Scuola Polizia oo doorashada Afhayeenka Barlamaanka ka dhaceyso
Amaanka Xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska oo ay ka dhaceyso doorashada guddoomiyaha barlamaanka Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la xirey dhamaan wadooyinka soo gala Xaruntaas. Ciidamo badan oo isugu jira kuwa sirdoonka iyo weliba ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa meel walba taagan.
Dugsiga Sare ee Booliiska Xamar oo hadda loo yaqaan Akademiyada Ciidanka Booliiska ee Jeneraal Kaahiye ayaa ka tirsan Degmada Xamar Jajab waana xarun aad u qurxoon oo ka mid ah meelo fara ku tiris ah oo dagaaladii sokeeye iyo burburkii ka badbaadey. waxaana lagu xardhey nalal qurxoon iyo weliba dhir aad u qurux badan oo gudaha xarunta lagu beerey.
Saacado kooban ayaa naga xiga xiliga ay doorashada guddoonka barlamaanka iyo ku xigeenadiisa lagu qabto xaruntaasi, waxaana doorashadaasi goob joog ka noqon doona masuuliyiin ka kala socota beesha caalamka oo indha indhayneysa qaabka doorashada.
Kala soco Idale News hadba meesha ay doorashadu mareyso.
Wareegii 1aad oo dhamaadey tirinta codadka oo weli socota